Daryeelka geedka geedaha | February 2020
Ugu Weyn Ee Daryeelka geedka geedaha
Daryeel iyo beeritaanka geedo tufaaxa ah: xeerarka ugu muhiimsan
Tufaaxa waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah midhaha ugu caansan, waa ay jecel yihiin carruurta iyo dadka waaweyn. Si ay u dhadhamaan, waxay yihiin macaan, dhadhan-macaan, tartan, adag iyo jilicsan, waxay dhammaan ku xiran tahay kala duwanaanta. Jam iyo macaanka waxaa laga sameeyaa tufaax, cabitaan, cabitaan miro ah, casiir, marmalade iyo geed isbonji la sameeyo, sidoo kale, waa la cuni karaa qaabka qalajinta iyo qadiimka.
Xeerarka abuurista iyo daryeelidda geedaha tufaaxa ee Siberia
Ka mid ah noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa, noocyada colonized waxaa lagu kala soocay soo jiidashada gaarka ah iyo quruxda. Intaa waxaa dheer, geedaha noocan oo kale ah ayaa keena goosashada qani ku ah, iyo tan iyo noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxu waa weyn, waxay si sahal ah u heli doonaan dadka degaanka xagaaga ma aha oo kaliya delicious (dhadhanka ayaa laga yaabaa in ay u kala duwan yihiin noocyo kala duwan), laakiin sidoo kale miraha multi-midab leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka geedka geedaha 2020